The music of Burma (or Myanmar) has similarities with and is related to many other musical traditions in the region. Burmese music includesavariety of folk traditions. A distinct form called the byaw is often played at religious festivals and is sung to the beat ofalong and thin drum, with occasional interruptions by the beating ofalarger drum. The Burmese monarchy as well as the infusion of different regional music styles, have created several classical traditions of Burmese music. The oldest influences may perhaps come from China, which sharesasimilar pentatonic musical scale as classical Burmese music. Traditional Music Channel is for everyone who hasapassion for music and cultural heritage. Whether you are an educator, artist, archivist, student or music enthusiast. With your support we can continue our mission. With recordings from more than hundred nations our Collection of Traditional Music offersastaggering diversity of our shared humanity. Traditional Music Channel © All Rights Reserved
Myanmar classical music (or) Burmese classical song Composed by U Kyaut Khae ဒီပါအေးမြ ရေး။ ။ ဦးကျောက်ခဲ ဆို၊ ၊ ကိုဝင်းဦး (ဒီပါအေးမြ၊ သပြေညာ၊ ရွှေတေဇာ၊ ရာသောင်းလုံး) ၂။ (ဘုန်းဧရာ့ ဂူငယ်မှာ၊ မှော်၇ုံဗွေစွန်းက၊ ခွေနွမ်းရန် ကြုံတယ်ကိုလေး၊ ပန်းပူလို့ဆွေး)၂။ (မကြိုလာ၊ သီတာသား၊ ခြားလို့နေတဲ့ ဟေ၀န်တောင်၊ ရီမှောင်ဆိုင်း၊ မှိုင်းလို့လို့လေး)၂။ (တံပိုးရေကျော်၊ ၀ဲမော်ဝေ့၀ိုင်း၊ မျှော်လေတိုင်း၊ ခေါ်လေတိုင်း၊ ဗျာလှိုင်းဆူလို့ ပူရန်ကြယ်၊ ပင်လယ်ကြီး၊ ဆီးလို့လို့လေး)၂။ (ကောင်းကင်ထက်ကယ်က၊ ငှက်ကယ်လို၊ သည်ဟို ပျံတတ်နိုင်သေး၊ ဟိုတိမ်ယံ ဘုံပျံဆန်း၊ နေနန်းနွယ့် လဲ့ပြာပြာ၊ ကြမ္မာဘယ်ဝဋ်ကယ် ကံမို့လဲ၊ ဆွတ်လွတ်ကယ် အူချာပွေလို့၊ ဆွေးကြေလုသဲ)၂။ (နန်းရွှေတောင်ညာ၊ လွန်ပူဆာ၊ ခွေယိုင်ကာသာ ညှိုး၊ ၀တိန်ပြည်သာ၊ ယာမာဘုံတိုင်၊ အုံ့လှိုင်တောင်ခိုး၊ ရေနတ်ကယ် မေခလာနှင့်၊ တောသာစောင့်မျိုး၊ ဘယ်နတ်ကယ် ဖန်မကူလို့ နန်းသူကြောင့် ညှိုး)၂။ (ချိပ်ပန်းငယ်ကာ၊ နှင်းတိမ်တွေ အဖြာဖြာနှင့်၊ လွမ်းသာလွယ်အောင်၊ ကမ်းဟိုတိမ်ယံ၊ ရွှေတိမ်ယံတက်ပါလို့၊ ၀င်းညက်ကယ်ထံ၊ ဘယ်တမန် မောင်စေလို့၊ ခင်းဖြေလိမ့်လည်း)၂။ (သန္ဓေကြာယူ၊ မျိုးမြတ်တဲ့သူ၊ ဆန်းမူရာသား၊ နန်းသူငယ့်လား၊ ရင်သတ်ကာ တမ်းပါလို့၊ ရမ်းမျှော်မိယောင်၊ သည်းခေါင်မှာ ဖိုလှိုက်လို့၊ ငိုရှိုက်ယောင်မှား) ၂။ သဖြန်။ ။ (သာပေါင်းငယ်ထွေ၊ သပြေပိုင်စိုးမဲ့ နေမျိုးဖျား၊)၂။ (ရွှေဘုန်းစက်စုံ၊ စိန်ခြူးအုံ ဘုံကနက်မှာ ထီးချက်ရိပ်ဖွား)၂။ Credit to https://www.facebook.com/groups/MmClassical/doc/223456711070286/
Myanmar (or) Burmese Classical music or song စောင်းဦးဘသန်းနဲ့ ဝင်းဦးတို့ တွဲဖက်သီဆိုထားတဲ့ ခါနွေဆန်း နွေဘွဲ့ယိုးဒယားလေး နားထောင်စေချင်ပါတယ်။ ခွန်းထောက် လေးရှေ့ကခံထားပါတယ်။ ဦးပြုံးချိုရဲ့ မဟာဂီတ ပေါင်းချုပ် စာမျက်နာ ၂၂၉ နဲ့ ၁၇၄ တို့မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်လဲ တင်ထားပေးပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါ။ https://docs.google.com/file/d/0B29os4mSLK0Za1E4RFp4bW5NTmM/edit?pli=1# လတပေါင်း ရွက်ဟောင်းငယ်က ကြွေခဲ့ပြီ။ ။ ရိုးတံမှာ ရွှေရည်လူးတယ် ဖူးကိုက်ညွန့်စီ။ ။ နွေဂိမ္မာန် ခါသာစွပေမို့၊ လွမ်းစရာ့ လရာသီ၊ ရွှေပြည်နှင့် မနီး။ ။ ချောင်းရှိုရိုးဆီက ၊ ရွှေချိုးတောင်စွန်ဖြူတို့ရယ် ၊ လွမ်းမူနှင့်ညည်း။ ခါ နွေဆန်း လန်းစီစီ.......
Myanmar classical music (or) Burmese classical song Composed by??? တောင်တောသာယာ(ယိုးဒယား) ဝင်းဦး,အလင်္ကာကျော်စွာ စောင်းဦးဘသန်း
Myanmar Classical : ဒီပါအေးမြ- Win Oo
Myanmar Classical : ခါနွေဆန်း - Win Oo+ Saung U Ba Than
Myanmar Classical : တောင်တောသာယာ- Win Oo + Harpist U Ba Than
Saung (Myanmar harp) U Ba Than played instrumental music (Saung) of Myanmar classical song.
The music of Burma (or Myanmar) has similarities with and is related to many other musical traditions in the region. Burmese music includesavariety of folk traditions. A distinct form called the byaw is often played at religious festivals and is sung to the beat ofalong and thin drum, with occasional interruptions by the beating ofalarger drum. The Burmese monarchy as well as the infusion of different regional music styles, have created several classical traditions of Burmese music. The oldest influences may perhaps come from China, which sharesasimilar pentatonic musical scale as classical Burmese music. Traditional Music Channel is for everyone who hasapassion for music and cultural heritage. Whether you are an educator, artist, archivist, student or music enthusiast. With y...
Myanmar classical music (or) Burmese classical song Composed by U Kyaut Khae ဒီပါအေးမြ ရေး။ ။ ဦးကျောက်ခဲ ဆို၊ ၊ ကိုဝင်းဦး (ဒီပါအေးမြ၊ သပြေညာ၊ ရွှေတေဇာ၊ ရာသောင်းလုံး) ၂။ (ဘုန်းဧရာ့ ဂူငယ်မှာ၊ မှော်၇ုံဗွေစွန်းက၊ ခွေနွမ်းရန် ကြုံတယ်ကိုလေး၊ ပန်းပူလို့ဆွေး)၂။ (မကြိုလာ၊ သီတာသား၊ ခြားလို့နေတဲ့ ဟေ၀န်တောင်၊ ရီမှောင်ဆိုင်း၊ မှိုင်းလို့လို့လေး)၂။ (တံပိုးရေကျော်၊ ၀ဲမော်ဝေ့၀ိုင်း၊ မျှော်လေတိုင်း၊ ခေါ်လေတိုင်း၊ ဗျာလှိုင်းဆူလို့ ပူရန်ကြယ်၊ ပင်လယ်ကြီး၊ ဆီးလို့လို့လေး)၂။ (ကောင်းကင်ထက်ကယ်က၊ ငှက်ကယ်လို၊ သည်ဟို ပျံတတ်နိုင်သေး၊ ဟိုတိမ်ယံ ဘုံပျံဆန်း၊ နေနန်းနွယ့် လဲ့ပြာပြာ၊ ကြမ္မာဘယ်ဝဋ်ကယ် ကံမို့လဲ၊ ဆွတ်လွတ်ကယ် အူချာပွေလို့၊ ဆွေးကြေလုသဲ)၂။ (နန်းရွှေတောင်ညာ၊ လွန်ပူဆာ၊ ခွေယိုင်ကာသာ ညှိုး၊ ၀တိန်ပြည်သာ၊ ယာမာဘုံတိုင်၊ အုံ့လှိုင်တောင်ခိုး၊ ရေနတ်ကယ် မေခလာနှင့်၊ တောသာစောင့်မျိုး၊ ဘယ်နတ်ကယ် ဖန်မကူလို့ နန်းသူကြောင့် ညှိုး)၂...
Myanmar classical music (or) Burmese classical song Composed by U Kyaut Khae ဒီပါအေးမြ ရေး။ ။ ဦးကျောက်ခဲ ဆို၊ ၊ ကိုဝင်းဦး (ဒီပါအေးမြ၊ သပြေညာ၊ ရွှေတေဇာ၊ ရ...
Myanmar (or) Burmese Classical music or song စောင်းဦးဘသန်းနဲ့ ဝင်းဦးတို့ တွဲဖက်သီဆိုထားတဲ့ ခါနွေဆန်း နွေဘွဲ့ယိုးဒယားလေး နားထောင်စေချင်ပါတယ်။ ခွန်းထောက် လေးရှေ့က...
Myanmar classical music (or) Burmese classical song Composed by U Kyaut Khae ဒီပါအေးမြ ရေး...
Myanmar (or) Burmese Classical music or song စောင်းဦးဘသန်းနဲ့ ဝင်းဦးတို့ တွဲဖက်သီဆိုထားတဲ့...
Myanmar classical music (or) Burmese classical song Composed by??? တောင်တောသာယာ(ယိုးဒယား) ...
Myanmar Classical music...
Myanmar Classical : ဒီပါအေးမြ- Win Oo...
Myanmar Classical : ခါနွေဆန်း - Win Oo+ Saung U Ba...
Myanmar harp မြန်မာစောင်းသံ...
Myanmar Classical : တောင်တောသာယာ- Win Oo + Harpist...
Saung (Myanmar harp) U Ba Than played instrumental...